कर्मचारीलाई मन्त्री अर्यालको निर्देशन : ठूल्ठूला मुन्द्रा लाउनेसँग नडराउनुस्, गैंडासँग नलोभिनुस् ! | Safal Khabar
कर्मचारीलाई मन्त्री अर्यालको निर्देशन : ठूल्ठूला मुन्द्रा लाउनेसँग नडराउनुस्, गैंडासँग नलोभिनुस् !
शनिबार, २१ मंसिर २०७६, १२ : ५३
पोखरा । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्‍माकुमारी अर्यालले कर्मचारीको कुशलता कार्यालयको गेटदेखि नै झल्किनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, नापी विभाग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले आज (शनिवार) पोखरामा आयोजना गरेको ‘आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी’ गोष्ठीमा कर्मचारीलाई निर्देशन गर्दै मन्त्री अर्यालले आफ्नो व्यवस्थापकीय क्षमता के हो भनेर गेटदेखि नै झल्किनेगरी काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
काम गर्नेक्रममा ठूला मुन्द्रा लगाउने विभिन्न व्यक्तिहरूसँग नडराउन समेत मन्त्री अर्यालले आग्रह गर्नुभयो । काम गर्ने क्रममा विभिन्न प्रलोभनमा नपरेर राष्ट्र र जनताको सेवामा समर्पित हुन मन्त्री अर्यालले कर्मचारीलाई निर्देशन गर्नुभयो । मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘ठूल्ठूला मुन्द्रा लाउनेसँग नडराउनुस् । गैंडासँग नलोभिनुस् ! इमान्दार भएर सेवाग्राहीको सेवामा समर्पित हुनुस् ।’
मन्त्रालय नयाँ ढंगबाट अगाडी बढ्न खोजेको भन्दै उहाँले बेथितिका कारण कहिलेकाँही उर्जा पनि निराश हुनुपर्ने अवस्था आउने गरेको बताउनुभयो ।
सेवा प्रवाह, आचरणका क्षेत्रमा केही न केही फरकपना आइदियोस भन्ने अपेक्षा रहेको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । ‘हामीमाथि औला ठडिएको छ । औला ठडिएपछि केही न केही फरकपना आउनैपर्छ’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘हाम्रो आचरणमाथि प्रश्न उठेको छ । प्रश्न उठेपछि सावधानिपुर्वक कामकारबाहीमा कँही प्रश्न नउठोस् भनेर सचेत हुनुस । कँहीनेर प्रश्न पनि नउठोस् । तपाइहरू संस्कारित बन्दिनुस ।’